Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "Empress", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "Empress", iro shamwari manzwiro?
Mu "Empress" neizvi nzvimbo zvichireva
nzira 3500 Yen nyanzvi kufembera usununguke yokunyatsoongorora
chete makadhi apo anomiririra mukadzi Pope ari mumudzimu yakakwirira mhandara, Empress rudo azere, zvave kumiririra mufananidzo rwaamai chinounza nyasha. Tenderai korona, nenhoo kuti mufananidzo nabhishopi mudonzvo uye gondo vanokweverwa, ndiko kadhi kuti wavhomorwa Empress agere tefe pachigaro choushe.
agere choushe, sezvo sokunge munhu Empress of bapiro, vanonzi makavanzarikwa chinhu womudzimu, kadhi kuti anomirira chifananidzo sezvo upenyu simba kana mai mwarikadzi exuberant . Kuti chinhu kubva Empress of kadhi iri rwaamai uye kushivirira, zvechikadzi runako, paumbwe musha, rudo, rinomiririra uye kubudirira. Kana iwe
Empress nevamwe manzwiro kuti akanaka chinzvimbo Vanzveri kureva
Empress zvakanaka nzvimbo vakabuda, iwe kumiririra kuti uri mudanga chaizvo mweya. Empress ari yakatarisana nyika sei yakakura pfungwa kuti kunyemwerera uye akagara zvakanaka, nekuti tinomiririra mamiriro ezvinhu uri kugutsikana, kune vose ndinofunga vanhu vari anokumhan'arira sezvo chete ndinonakidzwa pamusoro pako rinomiririra kuti.
vanonakidzwa pamwe chero uyewo nemumwe muzvinhu zviduku, nokuti rinomirira kuonga kana zvichibvira ukama, ndapota kuva pasina kunyemwerera kuda iri hurumende mupikisi. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo, mumwe bato harizonzwi nyaradzo nemi. Ndinotenda kuti vangave kuenda nemi, asi hurumende kuti asingaiti Okose zvinoitwa kubva yavo.
Haufaniri kuita kukurumidza, asi sezvo hurukuro kunyemwerera uye kuzorora, ndapota edza kuti auraye mhepo inoita bato vakasununguka. Dating uyewo ipfungwa yakanaka kuona akakokwa rinopikisa.
nemumwe kunzwa neizvi chinzvimbo Empress Vanzveri kureva
Emotional Kana Empress akabuda ari neizvi chinzvimbo, maturo, kusagadzikana mupfungwa, anoreva parameters zvakadai usimbe. Kana vaviri ndinofunga vanhu, pane mukana kuti mumwe bato iri kugutsikana Nezvagara Zviripo. Yeuka akasangana unokunakidza ezvinhu nguva anokumhan'arira uchikurukura yakachena mafungiro, ndapota kuti kufadza anokumhan'arira.
nyaya vanhu rusina kukwana mberi rudo iye haana vakanaka kuzorwa newe. Regai here kutora, dzakadai zvinoratidzwa pfumo Varwisei mumwe bato? Godo vamwe vebato edza kuyeuka, ngatiedzei kuti kuuya kubva panguva imwe nguva. Kubva zvinhu yachinja, asi tinoratidza kuti unoedza kutaura kune pati, kana mamiriro ezvinhu akadaro haachinji, nekuti uchava aireva kuti ukama nezvimwe bato asingadi mberi, tsvaka chinotevera mupikisi regedza zviri kungava kwakaoma.